साउदी -अमेरिका ‘प्रेम सम्बन्ध’ कहिलेसम्म ? « Onlinetvnepal.com
साउदी -अमेरिका ‘प्रेम सम्बन्ध’ कहिलेसम्म ?
Published : 28 August, 2018 12:52 pm
On : मुख्य
बीबीसी साउदी अरब र अमेरिकाबीच किन यति धेरै प्रेम छ? यो प्रश्न यस्तो हो की एक तानाशाह वा राजा र निर्वाचित राष्ट्रपतिबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनसक्छ?
अमेरिका लोकतन्त्र, मानवअधिकार र महिला अधिकारलाई लिएर विश्वभरमा बहस चलाउँछ। तर साउदी अरबसम्म अमेरिकाको बहस किन पुग्दैन?
इराकमा त अमेरिकाले सद्दाम हुसेनको तानाशाही विरुद्ध आक्रमण नै गर्यो। साउदी अरबमा पनि लोकतन्त्र छैन। मानव अधिकारमा आधुनिक मूल्य छैन र महिला आजपनि आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित छन्। तर अमेरिका चुप लागेको छ आखिर किन ? यस्तो कुन हित छ जसका कारण अमेरिका आफ्नो आधुनिक मूल्यलाई साउदीमा नजरअन्दाज गरिरहेको छ?
जनवरी २०१५ मा जब साउदी राजा अब्दुल्लाहको कलेजोमा संक्रमणका कारण निधन भयो तब अमेरिकी नेताहरुले श्रद्धाञ्लीको खोलो बगाए। तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामाले अब्दुल्लाहको प्रशंसा गर्दै भनेका थिए, ‘मध्य–पूर्वमा शान्ति स्थापना गन अब्दुल्लाहको ठूलो योगदान थियो।’
तत्कालीन विदेश मन्त्री जोन केरीले राजा अब्दुल्लाहलाई दूरदर्शी र विवेक सम्पन्न व्यक्ति भनेका थिए। उपराष्ट्रपति जो बाइडनले त आफू अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै राजा अब्दुल्लाहलाई श्रद्धाञ्जली दिन साउदी अरब जाने घोषणा गरेका थिए।
अमेरिकाको बाध्यता के हो?
राजा अब्दुल्लाहको निधनमा अमेरिकाको यो प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक थिएन। साउदी अरब र अमेरिका दशकौंदेखिका सहयोगी मुलुक हुन्। यसका बावजूद अमेरिका र साउदीका सुल्तानबीचको सम्बन्धमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको छ।
मानवअधिकारलाई लिएर साउदीको रेकर्ड निकै खराब छ। क्षेत्रीय शान्ति स्थापनामा पनि उसको भूमिका प्रर्याप्त संदिग्ध छ। अमेरिका र साउदीबीचको मित्रताका विषयमा के पनि भनिन्छ भने अमेरिकालाई साउदीको साथ जति आवश्यकता अहिले छ, त्यस्तो आवश्यकता कहिल्यै परेको थिएन।
राजा अब्दुल्लाहपछि उनका सौतनी भाइ सलमानले राजगद्दी सम्हालेका छन्। उनले पनि अमेरिकासँग पूर्ववर्ती सुल्तानको नीतिलाई जारी राखेका छन्। र अर्को कुरा के हो भने साउदीमा राजतन्त्र र त्यँहा कुनै विपक्षी छैनन्।
धार्मिक बहुलता जस्ता विषय त टाढाका हुन्। साउदीको कुल जससंख्यामा महिलाको संख्या ४२.५ प्रतिशत छ। सुरुमा साउदीमा महिलमाथि बच्चाको जस्तो व्यवहार गरिन्थ्यो। साउदीमा ‘गार्डियनशिप’ व्यवस्था छ।
जुन व्यवस्था अनुसार महिलाले काम या यात्रामा जानु अघि पुरुषको अनुमति लिनुपर्छ। राजा अब्दुल्लाहकी १५ छोरीमध्ये चार छोरीलाई १३ वर्षसम्म नजरबन्दमा राखिएको थियो। यो यसकारण गरियो की यी चार छोरीले महिलासँग जोडिएको नीतिलाई लिएर शाही शासनको आलोचना गरेका थिए। यी चार मध्ये दुई जनाले त आफूलाई राम्ररी खाना खानसमेत नदिएको बताएका थिए।
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराम ओबामाले राजा अब्दुल्लाहले मध्य–पूर्वमा शान्ति स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताएका थिए। जुन अभिव्यक्ति तथ्यपरक छैन। इजिप्टमा जब होस्नी मुबारकको शासन विरुद्ध लोकतन्त्रको समर्थक मानिस सडकमा उत्रिएका थिए, तब राजा अब्दुल्लाहले त्यसको विरोध गरेका थिए।
उनले राष्ट्रपति ओबामासँग होसनी मुबारकको सत्ता बचाउनकालागि हस्तक्षेप गर्न भनेका थिए। अर्कोतर्फ अमेरिका होस्नी मुबारक विरुद्धको आन्दोलनलाई समर्थन गरिरहेको थियो।
राजा अब्दुल्लाहले लामो समयसम्म इजिप्टको मुस्लिम ब्रदरहुडलाई सहयोग गरे। साउदी अरब क्षेत्रका शिया आन्दोलनको पनि विरोधी हो। शिया आन्दोलनबाट साउदीलाई के लाग्थ्यो भने यसले इरानको प्रभाव पढ्छ। जब शिया प्रदर्शनकारीले छिमेकी मुलुक बहराइनमा तानाशाही शासन प्रणालीलाई चुनौती थिए तब साउदीले आफ्नो सेना पठाएको थियो।
साउदीले सीरियामा पनि विद्रोहीलाई समर्थन गर्यो। तर यो उसकै विरुद्धमा गयो। साउदीमाथि सधैं इस्लामिक स्टेटलाई आर्थिक सहयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यी सबै गतिविधि वा आरोप लागेपनि आखिर अमेरिका साउदीको साथ किन दिन्छ? वाशिंटनमा इन्स्टिट्युट फर गल्फ अफेयर्समा साउदी अरबका विशेषज्ञ अली अल–अहमदको भनाइमा यसको सजिलो जवाफ छ–तेल।
उनले भने, ‘साउदी र अमेरिका कुनै स्वभाविक साथी होइनन्। तर पनि दुवै एक अर्काको साथ दिन छोड्दैनन्। दुवै एक अर्काको फाइदा उठाउँछन्। अमेरिकालाई १९४० को दशकदेखि साउदीबाट सस्तो मूल्यमा तेल उपलब्ध हुँदै आएको छ। र यही नै अमेरिका र साउदी अरबको दोस्तीको राज हो। तेल बाहेक पनि धेरै चिज छन्। तर मुख्य रुपमा तेल नै हो।’
साउदी अबर तेल उत्पादक देशको संगठन अर्गनाइजेशन अफ पेट्रोलियम एक्ससपोर्टिङ कन्ट्रीज (ओपेक) को सबैभन्दा धेरै तेल उत्पादक र मुख्य देश हो। ओपेक विश्वको ४० प्रतिशत तेलमाथि नियन्त्रण राख्छ। अमेरिका पछिल्लो वर्षमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल आयातकर्ता देश हो र त्यही कारण पनि उसको साउदीसँग घनिष्ट सम्बन्ध छ।
पछिल्लो वर्षमा अमेरिकाले आफ्नै जमिनमा तेलको उत्पादन सुरु गरेको छ। के भनिन्छ भने आगामी दिन अमेरिकाकालागि साउदी अरब आवश्यक पर्दैन। अमेरिका प्रत्येक दिन ९० लाख ब्यारल तेल उत्पादन गर्छ जुन साउदी अरबकै बराबरी हो।
अमेरिकालाई ८० प्रतिशत तेल र उत्तरी र दक्षिणी अमेरिकाबाट प्राप्त हुन्छ। र, २०३५ सम्म यो आवश्यकता पूरा हुन्छ। साउदी र अमेरिकाबीचको मुख्य व्यापार तेल र हतियारको हो। ओबामा प्रशासनले साउदीलाई ९५ अरब डलरको हतियार बिक्री गरेको थियो। साउदीसँग अमेरिकाको मतभेद पनि धेरै मुद्दामा छ।
सीरिया, इरान, इजराइल, प्यालेस्टाइन संघर्ष र इजिप्टमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि यी दुवै मुलुकबीच मतभेद सुरु भएको छ। साउदी इरानसँग परमाणु सम्झौता होस भन्ने चाहँदैन थियो। तर ओबामा प्रशासनले उक्त सम्झौता गरेको थियो। यद्यपी पछिल्लो समय राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त सम्झौता तोडेका छन्।
केही विश्लेषकका अनुसार आगामी दिनमा साउदी अरब नराम्रोसँग अस्थिर बन्न सक्छ। उनीहरुका अनुसार साउदी अरब केही गम्भीर समस्यासँग जुधिरहेको छ।
साउदीको कमान अहिले युवराज सलमानले आफ्नो हातमा लिएका छन्। तर उनको निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। उनलाई अनुभवहीन भनिन्छ। शाही परिवारमा सत्तालाई लिएर निकै किचलो हुने गरेको छ। युवराज सलमानले आफ्ना काका छोरा (भाइ) लाई जेलमा राखेका थिए। तेलको मूल्य घट्दो छ। साउदीको बजेट घटबढ भइरहेको छ। यमनमा साउदी अरब यस्तो लडाइँ लडिरहेको छ, जहाँबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन।
छिमेकी इरानसँग उसको सम्बन्ध राम्रो छैन। यदि अमेरिका तेलमा साउदीमाथि आश्रित नरहने हो भने साउदी अस्थिर हुने आशंका निकै बढ्नेछ। र यो अस्थिरताले साउदीको शाही परिवारलाई निश्चित रुपमा प्रभावित पार्नेछ र उसका सहयोगीलाई पनि।
बजारमा ठप्प खाना पकाउने ग्यास, यसकारण अब पाउन मुस्किल ! पुरा पढ्नुहोस
खाना पकाउने एलपी ग्यास बजारमा ठप्प हुन थालेको छ । यसैले अभाव चुलिएको छ ।
हेलिकोप्टर दुर्घटनामा ७ जनाकै निधन, हेलिकोप्टरमा यी व्यक्तिहरु सवार थिए ?
बुधबार ताप्लेजुङमा भएको एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित
हेलिकोप्टर दुर्घटना अपडेट : अहिले पनि धुँवा आइरहेको छ !
ताप्जेलुङमा पर्यटनमन्त्री सवार हेलिकोप्टर दुर्घटना भएको पुष्टि भएको छ । जनकल्याण आधारभूत स्कुलका प्रधानाध्यापक महेश
रेडबुल शक्तिबर्धक नभई मन्द विष, यी हुन् रेडबुलबाट हुने गम्भीर र प्राणघातक समस्या ! जानी राखौ
युवापुस्ता र खेलाडीले रेडबुललाई शक्तिवद्र्धक पेय पदार्थका रूपमा बढी प्रयोग गर्ने गरेका छन्। युरोप र